ultra - ATR ဦးရေပြား tool ကို - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ ultra – ATR ဦးရေပြား tool ကို
ultra – ATR ဦးရေပြား tool ကို
မည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်အသုံးဝင်သောပေမယ့်တကယ်ဦးရေပြားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အကောင်းဆုံး entry ကိုရာထူးပြသရန်အပြောင်းအလဲများကိုအရောင်.
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို PIP စကေးရှိပါတယ်, ATR / မဏ္ဍိုင်, MA အဆင့်အထိ, RSI, နှင့်တပ်လှန့်ပြန့်နှံ့. မည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်သုံးနိုငျ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကို scalping အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ရဲ့ကတည်းကအတန်ငယ် M1-M15 များအတွက်ချိန်ညှိနေသည်.
Settings များ: သုညအဆင့် Shift တိုက်ဖျက်ရေး.
ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စကေးဖြစ်ပါသည်. အလယ်တန်း (သုညအဆင့်အထိ) ရှေးခယျြသောဖယောင်းတိုင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလယ်မှာနေရာချနေသည်. သငျသညျ pullbacks ကနေပယ်ဖျက်ခံရခွဲခြားနိုင်အောင်ဒီအချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
လက်မ၏စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်: စျေးနှုန်းသုညအဆင့်အထက်အခါလမ်းကြောင်းသစ်တက်ဖြစ်, စျေးနှုန်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆင်းဖြစ်ပါသည်.
ATR / မဏ္ဍိုင်
Settings များ: mode ကို(စံ,Fibonacci), ကာလ (M5 ဘား၏အဘယ်သူမျှမ), လိုင်းများ – စတိုင်, အရောင်, width.
ဒီတစ်ခုနောက်ကွယ်မှအချို့သင်္ချာရှိပါတယ်. M5 ဘား၏ရှေးခယျြသောအရေအတွက်ကို၏အလေးချိန်ပျှမ်းမျှ (ပွင့်လင်း / နီးကပ် / မြင့်မားသော / အနိမ့်စျေးနှုန်း)
ဘို့(ကိုယ့် = 1 int;ကိုယ့်<N_Bars;ကိုယ့် ++)
mod * =(နှစ်ဆ)(iVolume(null,inpTimeFrame,PivotBar + I));
xOpen + = mod * iOpen(null,inpTimeFrame,PivotBar + I);
xClose + = v * iClose(null,inpTimeFrame,PivotBar + I);
xHigh + = mod * iHigh(null,inpTimeFrame,PivotBar + I);
xLow + = mod * iLow(null,inpTimeFrame,PivotBar + I);
div v = +;
အကွာအဝေးကဒီအကွာအဝေးကနေ ATR နှင့်အတူချိန်ညှိနေသည်,
နှစ်ဆ xATR = iHigh(null,ATRTimeFrame,iHighest(null,ATRTimeFrame,MODE_HIGH,5*N_Bars,0))
နှစ်ဆ xRange =(xHigh-xLow)+xATR;
သောကြောင့်ဤအဆင့်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၏, ATR တန်ဖိုးကိုပေါ် မူတည်., ဒါရှေးခယျြသောကာလကဒီမှာကြီးမားသောကွာခြားချက်စေသည်. အဆိုပါအနိမ့်အရေအတွက်ကပိုပြောင်းလဲနေသောအဆင့်ဆင့် (သူတို့ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်စာချုပ်ပါလိမ့်မယ်). intraday ကုန်သွယ် / ဦးရေပြားကာလအဘို့ 12 – 288 ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် (1-24 နာရီ).
ပဲနဲ့အခြားမဏ္ဍိုင် tools များနှင့်တူလက်မ၏စည်းမျဉ်း.
Settings များ: ကာလ, နည်းလမ်း, အသုံးချစျေးနှုန်း, သတ်မှတ်ချိန်, လိုင်းအရောင် / စတိုင် / အကျယ်.
ဒါကရှေးခယျြသောအချိန်-frame ကိုထံမှ Moving ပျမ်းမျှ၏နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းကိုပြသကြောင်းနောက်ထပ်လိုင်းဖြစ်ပါသည်. အဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် “အပြင်မှာ” ဇယားမျဉ်းဇယား၏ထိပ်ဆုံး / အောက်ခြေမှာရေးဆွဲနေသည် (ရှည်ခြင်းနှင့်ထူ). ငါ EMA ကိုသုံးပါ(16) H1 အပေါ်ပုံမှန်စျေးနှုန်း, ကြောင်းတော်တော်ကောင်းကောင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြသ.
လက်မ၏စည်းမျဉ်း: လမ်းကြောင်းသစ်တက်ပြီးတော့စျေးနှုန်း MA မျက်နှာပြင်အထက်ဖြစ်ပါသည်, စျေးနှုန်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆင်းဖြစ်ပါသည်.
Settings များ: ကာလ
ဒီတစ်ခုပထမဦးဆုံးမှာရှုပ်ထွေးပုံပေါ်စေခြင်းငှါ. (ဒါကြောင့်ပိုဘက်မှ RSI ကြည့်နဲ့တူရဲ့, အစီအစဉ်အမြင်နဲ့တူ). လိုင်းကလက်ရှိ RSI ပြသ, အရောင်စွာနောက်ဆုံးဎဘား၏အစီအစဉ်အမြင်ပြသ (မိ / max ကိုတနျဖိုး) (ဎ RSI ကာလအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်).
လက်မ၏စည်းမျဉ်း: RSI > 50 လမ်းကြောင်းသစ်တက်ဖြစ်, RSI < 50 လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါ့အပြင်အရောင်စွာဘေးတိုက်ယိသောအခါအလှည့်ပတ်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါသည် 50.
Settings များ: အချိုးအစား, အရောင်.
တပ်လှန့်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် ATR များ၏အချိုး Set. အဲဒါကို Bid ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခါ / လိုင်းမေးပါ, တချို့အတိုင်းအတာလိုင်းများသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုဆွဲရန်. အချို့သောပြည်တွင်းရေးနံပါတ်များကိုပြသနိုင်ဖို့ဒီဘာဂ် mode ကို Enable, ထို့အပြင်ပြန့်နှံ့, သင်ဤအဆင့်ကိုထိန်းညှိကူညီပေးဖို့ ATR နှင့်% အချိုး.
ultra – ATR ဦးရေပြား tool ကိုတစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
ultra – ATR ဦးရေပြား tool ကိုသာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
က Ultra ကို install လုပ်နည်း – ATR ဦးရေပြား tool.mq4?
က Ultra Download – ATR ဦးရေပြား tool.mq4
က Ultra မိတ္တူ – သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ ATR ဦးရေပြား tool.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
က Ultra ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး – ATR ဦးရေပြား tool.mq4
က Ultra indicator – ATR ဦးရေပြား tool.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
က Ultra ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို – သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ ATR ဦးရေပြား tool.mq44ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးRoyse RSI
basit ali khan Jul 29, 2018 တွင် 1:18 pm
thaanks, this very useful indicator for scalping so download it and enjoy .